Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း)
Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း) ကဘာလဲ။
Internal thrombosed hemorrhoids ဆိုတာ သွေးလည်ပတ်မှု ပုံမမှန်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းအိမ်အောက်ပိုင်းရှိ သွေးပြန်ကြောများ ရောင်ရမ်းဖောင်းကြွခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သွေးမခဲရင်တော့ နာကျင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ သွေးခဲပိတ်သွာရင်တော့ သွေးကြောထဲ ဖိအားများလာပြီး ရောင်ရမ်းလာကာ ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။
Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Internal thrombosed hemorrhoids ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
-ဝမ်းအိမ်မှ သွေးယိုခြင်း- ရှေးဦးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းသွားပြီး စအိုကိုသုတ်လိုက်တဲ့ စက္ကူမှာ သွေးစမြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးလာတာနဲ့အမျှ သွေးယိုနှုန်းဟာ များလာပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
-နာကျင်ခြင်း- ပထမပိုင်းမှာတော့ ဝမ်းသွားခါနီး ဗိုက်ရစ်လျှင်သာ နာကျင်မှုကိုခံစားရပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ သင့်တော်တဲ့ ကုသမှုမရပါက ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ နာကျင်မှုက ပိုမိုဆိုးလာပါမယ်။ လမ်းလျှောက်ဖို့၊ မတ်တပ်ရပ်ဖို့ပါခက်ခဲလာပါမယ်။
– ယားယံခြင်း – ဝမ်းအိမ်နံရံ ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် ချွဲများထွက်ပေါ်လာပြီး စအိုဝန်းကျင်တွင် ယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
– စအိုထဲ တစ်ခုခုရှိနေသလိုခံစားရခြင်း
-ဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်း- ဝမ်းအိမ်ရှိ ကြွက်သားများ လျော်လျဲလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စတဲ့ရောဂါ လက္ခဏာများကို မကုဘဲ ပစ်ထားပါက ဆိုးရွားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ရောင်ရမ်းမှုဟာ စအိုဝထိရောက်လာပြီး Prolapsed Internal Hemorrhoids ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ထိုအခါတွင်တော့ အရေးပေါ် ခွဲစိပ်မှု မျိုးလိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဝမ်းလျှောခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းချုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဝမ်းကိုပြင်းထန်စွာ ညှစ်လေ့ရှိခြင်းဟာ ဝမ်းအိမ်ထဲရှိ ကြွက်သား နှင့် သွေးကြောများကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
-အထိုင်များခြင်း- အလုပ်ကြောင့် သို့မဟုတ် အခြားသော အခက်အခဲများ ကြောင့် မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနည်းပြီး အထိုင်များသူများတွင် ဝမ်းအိမ်ဝန်းကျင် သွေးလည်ပတ်မှု ပိတ်ဆို့တတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မတ်တပ်ရပ်၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းများ မကြာခဏ ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ လမ်းလျှောက်ခြင်းက အတွင်းလိပ်ခေါင်းကိုကာကွယ်ဖို့
မလုံလောက်ပါဘူး။ ခန္တကိုယ်ရှိ ကြွက်သားအားလုံး တောင့်တင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
-အမျှင်ဓါတ်နည်းသော အစာများစားသုံးခြင်း- အမျှင်ဓါတ်နည်းသော အစာများစားသုံးခြင်းဟာ ဝမ်းမကြာခဏချုပ်စေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဟာ အတွင်းလိပ်ခေါင်းကို ပိုမိုဖြစ်စေသော ကြောင့် အမျှင်ဓါတ်များသော အစာများရွေးစားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
-အဝလွန်ခြင်း- အဝလွန်သော သူများတွင် နှလုံးနှင့် သွေးကြော စနစ်များ အပါအဝင် ခန္တကိုယ်ရှိ အခြား စနစ်များပေါ်၌ ဖိအားပိုများတာတွေ့ရပါတယ်။ သွေးကြောများဟာ ဖိအားဒါဏ်ကြောင့် သွေးခဲများဖြစ်ကာ အတွင်းလိပ်ခေါင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
-ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့် မီးဖွားရခက်ခဲခြင်း- သန္ဓေသားဟာ ကြီးထွားလာသည်နှင့် အမျှ မိခင်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ဝန်းကျင် သွေးကြောများကို ဖိပါတော့တယ်။ သွေးကြောများ ထိခိုက်ပျက်စီးပြီး သွေးခဲများဖြစ်ကာ အတွင်းလိပ်ခေါင်းများ ဖြစ်စေပါတယ်။ မီးဖွာရခက်ခြင်းဟာလည်း အလားနည်းတူပါပဲ။
-အသက်အရွယ်- အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ ခန္တာကိုယ်ရှိ တစ်ရှူး ကြွက်သားများ လျော့ရဲ လာပါတယ်၊ အတွင်းလိပ်ခေါင်းဖြစ်ဖို့ အားပေးတဲ့ အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘယ်အရာတွေက Internal thrombosed hemorrhoids ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Internal thrombosed hemorrhoids ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Internal thrombosed hemorrhoids (အတွင်းလိပ်ခေါင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Internal thrombosed hemorrhoids ကိုကုသရာတွင် ခွဲစိပ်နည်းများ ရှိသကဲ့သို့ ခွဲစိပ်ရန်မလိုသော နည်းများလည်းရှိပါတယ်။ ရောဂါ အစောပိုင်းတွင် အိမ်သုံးကုထုံးများနှင့် အခြား ခွဲစိပ်ရန်မလိုသောနည်းလမ်းများ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါ အစောပိုင်းကို သတိမပြုမိဘဲ၊ သင့်တော်တဲ့ ကုသမှုမျိုးမခံယူဘူးဆိုရင်တော့ လိပ်ခေါင်းဟာ ပိုမိုကြီးလာပြီး ပြင်းထန်စွာနာကျင်လာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေ ရောက်ရင်တော့ အရေးပေါ်ခွဲစိပ်ကုသမှု ခံယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Internal thrombosed hemorrhoids ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Internal thrombosed hemorrhoids ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
-အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ ၊ဝမ်းပျော့ဆေးများ အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆေးပါသော အဆီ၊ ခရမ် နှင့် suppository များ စအိုမှ သုတ်လိမ်းခြင်း တို့လည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းဖြင့် ပျက်စီးနေသော သွေးကြောများ ပြန်သန်မာရန်၊ သွေးခဲပျော်ရန် အချိန်ရပြီး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးယိုခြင်းများ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
-အစားအသောက်နှင့် စားသောက်ပုံစံကိုလည်း စတင်ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
-အမျှင်ဓါတ်များသော အစားအသောက်များ စားခြင်းဖြင့်
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပြီး ဝမ်းပျော့စေပါတယ်။(
-ယောင်ရမ်းခြင်းကိုကျစေတဲ့ အာလူး ဖျော်ရည် ကိုလည်း အစာစားခင် သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
-ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လည်း ခန္တာကိုယ်ရှိ ကြွက်သားများကို သန်စွမ်းတောင့်တင်းစေပါတယ်။
-ဝမ်းသွားလိုပါက ချက်ချင်းသွားပါ။ အောင့်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
-“Sitz baths” ဟုခေါ်တဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ ဆားရည်နွေးထဲမှာ မိနစ် ၃၀ ခန့် ထိုင်ခြင်းဖြင့် ယောင်ရမ်းခြင်းများ သက်သာ စေပါတယ်။
– Persicaria maculosa ဆိုတဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အရွက် ပါတဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ယောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားယံခြင်းများ သက်သာ စေနိုင်ပါတယ်။
-သဘာဝဖြစ်တဲ့ အာလူး၊ ပြားရည်၊ ရှာစောင်းလက်ပက် စတဲ့ ပစ္စည်းများ ပါတဲ့ ဝမ်းနှုတ်ဆေးကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
-သစ်ဥသစ်ဖု၊ အာလူးရည်၊ chamomile ၊ calendua ၊ buckthorn oil decoctions များပါဝင်တဲ့ ဝမ်းနှုတ်ဆေးကိုလည်း စအိုမှ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Internal thrombosed hemorrhoids.
Accessed November 7, 2017
http://www.thrombosedhemorrhoidsinfo.com/internal-thrombosed- hemorrhoids/. Accessed
https://www.webmd.com/digestive-disorders/understanding-hemorrhoids- treatment-medref#1. Accessed November 7, 2017